R/wasaaraha oo maanta booqday qaar ka mid ah Xarumaha Wasaaradaha | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/wasaaraha oo maanta booqday qaar ka mid ah Xarumaha Wasaaradaha
R/wasaaraha oo maanta booqday qaar ka mid ah Xarumaha Wasaaradaha
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyrre ayaa kormeer shaqo ku tagey xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaaliya oo sidoo kale ay daggan yihiin Wasaaradaha Caafimaadka iyo Qorshaynta. Wuxuna u kuur galayay qaab howlleedka shaqo ee Wasaaradahaasi ka socda.
Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyrre ayaa mid-mid u galay xafiisyada kala duwan ee wasaaradaha oo ay goob joog ahaayeen shaqaalaha iyo maamulka , is xog waraysi kaddib waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha wasaradaha inay dardar geliyaan shaqada ay u hayaan shacabkooda, isla markaana ay uga soo baxaan si hagrasho la’aan ah.
Ugu danbayn, Mudane Xasan Cali Kheyrre ayaa guud ahaan shaqaalaha u sheegay inay markasta xasuusnaadaan inay hayaan shaqo qaran oo muhiimad gaara u leh dawladda iyo shacab keeda, isla mar ahaantana ay iska saaraan mas’uuliyad gaara.
Previous articleAgaasimaha cusub ee Radio Muqdisho oo xilka la wareegay
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo wadahadal la yeeshay Sheekh Maxamed Bin Zayed